Nhau - Yakajairika mheni inosunga kupatsanura.
Kune akawanda marudzi emheni dzinosunga, kusanganisira simbi oxide inosunga, tambo yesimbi oxide inosunga, isina giraidhi simbi oxide inosunga, yakazara insulated inoumbwa nejasi simbi oxide inosunga, uye vanobvisirwa vanobata.
Mhando huru dzevasungwa ndivo vane tubular vanosunga, vharuvhu inosunga uye zinc oxide inosunga. Huru hwekushanda musimboti werudzi rwese rwemheni inosunga hwakasiyana, asi hunhu hwavo hwekushanda hwakafanana, zvese kuchengetedza tambo yekutaurirana nemidziyo yekutaurirana kubva mukukuvara.
Iyo tubular inosungwa iri chaizvo gapfu yekudzivirira ine yakakwira arc yekudzimisa kugona. Inosanganisira maviri akateedzana maburi. Gap imwe iri mudenga, inonzi gap yekunze. Basa rayo kupatsanura iyo inoshanda voltage uye kudzivirira gasi inogadzira pombi kubva kuyerera nepombi. Yechipiri inopiswa kunze neiyo frequency frequency leakage yazvino; imwe yacho yakaiswa mupombi yemhepo uye inodaidzwa kuti iri gwanza remukati kana gomba rekudzimisa arc. Iyo arc yekudzimisa kugona kweiyo tubular musungwa inoenderana nehukuru hwesimba frequency inoenderera ikozvino. Iyi inodzivirira gamba mheni inosunga, iyo inonyanya kushandiswa kudzivirira mheni patambo dzemagetsi.
Mhando yemagetsi inosunga
Iyo vharuvhu-yerudzi yekusunga inoumbwa neyakajeka gwanza uye yevhavha yeplate resistor. Izvo zvinhu zvevharuvhu yeplate resistor yakakosha silicon carbide. Iyo vharuvhu chip resistor yakagadzirwa nesilicon carbide inogona kunyatso kudzivirira mheni uye yakakwira voltage, uye kuchengetedza iyo michina. Kana paine magetsi emagetsi akakwirira, gwanza remoto rakaputsika, kukosha kwekudzivirira kwevhavha yeplate kudonha, uye iyezvino mheni inopinzwa pasi, iyo inodzivirira tambo kana michina yemagetsi kubva kukuvadzwa nemheni yazvino. Pasi pemamiriro ezvinhu akajairika, mukaha wepasipi hauzoputswa, uye kukosha kwekumanikidza kwevhavha yeplate ndiro yakakwira, iyo isingakanganise kutaurirana kwese kwetambo yekutaurirana.
Zinc oxide inosunga
Zinc oxide mheni inosunga chidziviriro chemheni chine yakanyanya kudzivirirwa mashandiro, kurema uremu, kusvibiswa kuramba uye kugadzikana kuita. Inonyanya kushandisa yakanaka isiri-mitsara volt-ampere hunhu hwe zinc oxide kuita yazvino kuyerera kuburikidza neyekusungwa iri diki kwazvo (microamp kana milliampere level) pane yakajairika kushanda voltage; kana iyo yekuwedzeredza voltage ikaita, iko kuramba kunodonha zvakanyanya, kuburitsa iyo inopfuura simba Energy kuti iite mhedzisiro yekudzivirira. Musiyano uripo pakati pemhando iyi yekusungwa neyechinyakare musungwa ndeyekuti haina kuburitsa gap uye inoshandisa izvo zvisina-mitsara hunhu hwe zinc oxide kuburitsa uye kutyora.
Mheni dzinoverengeka dzinosungwa dzinounzwa pamusoro. Imwe neimwe mhando yekusungwa ine zvayakanakira uye hunhu. Inoda kushandiswa munzvimbo dzakasiyana kuti igone mheni yakanaka yekudzivirira.